နိုင်ငံတော် သမ္မတကို ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်က ရခိုင် အရေးအတွက် ဘာတွေ တင်ပြခဲ့သလဲ……. ENGLISH Version
တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း	— July 18, 2012 at 6:53 pm	နိုင်ငံတော် သမ္မတကို ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်က ရခိုင် အရေးအတွက် ဘာတွေ တင်ပြခဲ့သလဲ…….
Photos by Myanmar express
ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလီ အရေးကိစ္စကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီကိစ္စမှာ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထဲက အမြင်မရှင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစု တချို့၊ ပြင်ပ သံတမန်အသိုင်း အ၀ိုင်းတွေ၊ နိုင်ငံတကာ သံရုံးတွေက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘယ်လို လူတွေလည်း ဆိုတာကို ဂဃနဏ မသိဘဲ ဖြစ်နေကြတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒီအကြောင်းကို ရခိုင်-ဗမာ ပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ သမိုင်းပညာရှင်တွေ စုပြီးတော့ နေပြည်တော်မှာ သမိုင်းဆိုင်ရာ Seminar ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် Workshop ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြုပ်လုပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတဘက်မှ ပြန်လည် တုန့်ပြန် ပြောဆိုချက်
Related Postsဘူးသီးတောင် မောင်တော ဒေသသို့ သူရ ဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် သွားရောက်ခဲ့သူ ဦးဘရှင်အား မေးမြန်းချက်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးနှင့် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးတို့ စစ်တွေ မြို့မိ မြို့ဖ ၁၆ ဦးနှင့် တွေ့ဆုံရခိုင်စာဆိုတော်နေ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကဗျာဆရာ စစ်တွေ ညိုသန့်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကျောင်းမီးရှို့ခံရတဲ့ မောရ၀တီ ဆရာတော် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ကို ဘာတွေ ပြောလိုက်သလဲ (အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှု့နိုင်ပြီ) အမျိုးသားရေး လက္ခဏာနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ RNDP ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ အင်တာဗျူး
ဆက်စပ်သတင်းကိုခိုင်ပြည်ကျော်ရဲ့ “ ရခိုင်သဇင် ပန်းဘုရင်” သီခြင်းခွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း (တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း)သမ္မတရုံးဝန်ကြီးနှင့် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးတို့ စစ်တွေ မြို့မိ မြို့ဖ ၁၆ ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမောင်တောမှာ ALD ရုံးလာဖွင့်တဲ့ ဆရာ ဦးကျော်ထွန်းအောင်နဲ့ အင်တာဗျူးဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက်ကနေ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်မှာ ရခိုင်အမတ်တွေက ဘာတွေကို တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲမတ်လ ၇ ရက်နေ့ စစ်တွေ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဒေါ်ညိုအေးနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်းအရေးအခင်းကြောင့် ကျောင်းမဲ့နေတဲ့ ကလေးများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ နယ်စပ်က အခမဲ့ ပညာသင်ကျောင်း အကြောင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းဖက်ဒရယ် မရရင် တိုင်းရင်းသားများ လက်နက်စွန့်မည် မဟုတ် (အင်တာဗျူး)နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန် အဖွဲ့ MSF ကို ရခိုင်တွေ ဘာကြောင့် ဆန့်ကျင်သလဲ“အမင့်ပျိုးခင်း” ကျောင်းမှ ရခိုင်သင်ပုန်းကြီး ဖတ်စာကို သင်ပေးနေတဲ့ ဆရာမ နှင်းနုခိုင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်၂၀၁၂ ခုနှစ် ရက္ခိတ ဆုချီးမြှင့် ခံရသည့် ဆရာကြီး ဦးမောင်ဗသိန်းနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း (နိရဉ္စရာ သတင်းများကို မည်သူမဆို လွှတ်လပ်စွာ ကူးယူဖေါ်ပြနိုင်သည်။ သို့သော် သတင်းရင်းမြစ်နေရာတွင် နိရဉ္စရာ နာမည်ကို ဖေါ်ပြရပါမည်။) Share: